Iprojekthi kaKate Middleton yokubamba iPhoto ngoku iyiNcwadi: Indlela yokuthenga - Indumasi
Eyona Indumasi U-Kate Middleton wamnceda njani ukuba ajike iProjekthi yakhe yoBhubhane ibe yiNcwadi yesiNtu
UKate Middleton ungena kwindawo yokupapasha ngeprojekthi yakhe yokufota, Bamba ngxi .UMat Porteous ngeFoto yeMifanekiso
Kunyaka ophelileyo, uKate Middleton wadibana ne Igalari yeSizwe yeMifanekiso ukumilisela iprojekthi ekhethekileyo yokufota Bamba ngxi . IiDuchess zaseCambridge , ophethe iRoyal Portrait Gallery, ubuze abantu abavela kuyo yonke i-UK ukuba bangenise imifanekiso ebonisa ubomi babo phakathi kobhubhane we-coronavirus ; Injongo yayikukubamba umfanekiso wesizwe ngexesha le-COVID-19.
IiDuchess Kate kunye negqiza labagwebi lafumana ukungeniswa okungaphezulu kwama-31,000, kunye nemifanekiso eyi-100 eyayibekwe kumboniso wedijithali kwiGalari yeSizwe yeParagrafi. Ngoku, iprojekthi iguqulwa yaba yincwadi yetafile yekofu ekhethekileyo, enesihloko Bamba ngoku: Umzobo weSizwe sethu ngo-2020 .
Bhalisela iNcwadana yeRoyals yoMqwalaseli INkosana uWilliam kunye noKate batyelele indawo yokubonisa isikhululo saseWaterloo ngo-Okthobha.UJeremy Selwyn - Iphuli yeWPA / imifanekiso kaFetty
Incwadi iya kuba nemifanekiso ekhankanywe apha ngasentla eyi-100 ekhethiweyo Bamba ngxi umboniso; ifoto nganye ikhatshwa libali elisemva komfanekiso, kunye nemifanekiso eyongezelelweyo ebonisa umboniso wangaphandle we Bamba ngxi. Ukubuya ngo-Okthobha, iNkosana uWilliam kunye noKate batyelele enye yeendawo zemiboniso kwiSikhululo saseWaterloo eLondon ukuphawula ukumiliselwa kweprojekthi.
U-Kate wanikezela ngokujonga incwadi enoqweqwe olulukhuni ngeeakhawunti zeendaba zasekuhlaleni zaseCambridges, nalapho athe wabonisa ngobuchule bakhe obungenampembelelo wokungabikho kwebhokisi. IiDuchess zaseCambridge ngumfoti okhutheleyo ngokwakhe, kwaye ngelixa izakhono zakhe zeefoto zobuqu zingazukuboniswa kwincwadi enamaphepha ali-168, wabhala isandulela. UDuchess Kate ubhale intshayelelo ku Bamba ngoku: Umzobo weSizwe sethu ngo-2020 incwadi.Mat Porteous ngeFoto kaFoto
Xa sijonga ngasemva kwindyikityha ye-COVID-19 kumashumi eminyaka ezayo, siyakucinga ngemiceli mngeni sonke esijamelene nayo- abo sibathandayo siphulukene nabo, ukuhlala bodwa kwiintsapho zethu kunye nabahlobo kunye noxinzelelo olubekwe kubasebenzi bethu abaphambili, ubhala uKate. kwintshayelelo yencwadi. Kodwa siza kukhumbula okuhle: izenzo ezintle zobubele, abancedisi kunye namagorha avele kuzo zonke iinkalo zobomi, kunye nendlela esidibene ngayo ukuze siqheleke.
Ngokusebenzisa Bamba ngxi , Bendifuna ukusebenzisa amandla okufota ukwenza irekhodi elihlala lihleli lezinto esasinazo sonke-ukubamba amabali abantu kunye nokubhala amaxesha abalulekileyo kwiintsapho kunye noluntu njengoko sasiphila kulo bhubhane.
Iposi elabiwe nguDuke kunye neeDuchess zaseCambridge (@kensingtonroyal)
Bamba ngoku: Umzobo weSizwe sethu ngo-2020 Ixabisa i- $ 24.95 (ngaphezulu nje kwe- $ 34) kwaye iya kufumaneka ukuze ithengwe kwi-Intanethi nakwiivenkile zeencwadi zase-UK eziqala ngoMeyi 7, ngokuchanekileyo unyaka ukusukela oko iDuchess Kate yaqala iprojekthi yokuqala. Ingeniso efunyenweyo iya kwahlulwa phakathi kweGrafu kaZwelonke yeMifanekiso kunye nesisa sempilo yengqondo Ingqondo . Ukuba awukwazi ukulinda ukuze ufumane izandla zakho kwi-tome yesisa, unako lungiselela kwangaphambili le ncwadi ngoku kwivenkile ekwi-Intanethi yegalari yeSizwe . Yongezwa ngokugqibeleleyo kwivignette yakho yetafile yekofu.
'I-Borat 2' ibhengeza ubuNkohliso obuqhelekileyo boMboniso waseMelika okhethekileyo
UNoomi Rapace Ngumama Ongatshatanga Onengxaki Enzulu KwiPsychodrama 'Ingelosi Yam'
Ukubetha u-Obama, uMama kwi-Prez Politics, uLance ukhaba i-CD7 yakhe yoKhetho kwakhona
I-2019 yeTop 7 Tech IPO Flops-Kwaye ezo zisetelwe iMbuyekezo enkulu ka-2020
Isitshisi esona sigqibeleleyo soxinzelelo lwegazi
iphi indawo tesla ngoku
okona kulungileyo ngaphezulu kweepilisi zokutya zamandla
ukuba abantu bebezingelosi akukho rhulumente ebeya kuba nentsingiselo eyimfuneko
elawulwa kude isidlidlizi sex yokudlala